हिन्दुहरु सडक रोकेर आन्दोलन गर्ने, क्रिश्चियनले आँखा झिम्क्याउन नपाउने ? : बुद्ध घिसिङ्ग, क्रिष्टियन नेता (पुरा अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस) « Sajha Page
हिन्दुहरु सडक रोकेर आन्दोलन गर्ने, क्रिश्चियनले आँखा झिम्क्याउन नपाउने ? : बुद्ध घिसिङ्ग, क्रिष्टियन नेता (पुरा अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस)
काठमाडौं । रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्रीमा वहाल भएको केही दिनमै एउटा अभिव्यक्ति दिए, ‘नेपालमा मन्दिर भत्काएर ईसाइकरण गरिँदैछ’ । उनको अभिव्यक्तिलाई एक पक्षले कसरी पनि बुझ्यो भने, धर्म निरपेक्षताको नारा बोकेर हिन्दुराज्यविरुद्ध युद्ध गरेको पार्टीका नेता बादलले अचानक इसाइकरण भएकोमा किन चिन्ता व्यक्त गरे ?
अर्को पक्षका अनुसार राज्यको जिम्मेवार तहमा बस्ने मान्छे इसाइकरण भएको थाहा पाएपछि बोल्ने हैन, कारवाही गर्नुपर्छ । जे भए पनि बादलको अभिव्यक्ति विवादित भयो । त्यसो त, बादलकै पछिपछि कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र प्रधानमन्त्री स्वयंले इसाइकरणबारे अभिव्यक्ति दिन थाले । संविधानमै धर्म निरपेक्षता भनी उल्लेख गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, कानुनमन्त्री लगायत जिम्मेवार व्यक्तित्वबाट यस्ता अभिव्यक्ति सँगसँगै आउनुको पछाडि केही रहस्य त पक्कै छ ।
अर्थात् धर्मको विषयलाई उनीहरु किन यति ठूलो विषय बनाइरहेछन् ? ‘क्रिश्चियानिटी’को गुन्जायस छ भने त खास निकायबाटै हुन्छ । र ति निकायमाथि कारवाही गर्नसक्ने एकमात्र संयन्त्र सरकार हो । त्यसो भए प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा भाषण गर्नु नै आफैँमा रहस्यमय विषय हो । नेपालआजले एकजना क्रिश्चियन अगुवा, (जो पेशाले कानुन व्यवसायी तथा मानवअधिकारकर्मी हुन्), बुद्ध घिसिङसँग बहस गरेका छौँ । ‘क्रिश्चियनहरुलाई लक्षित गर्दै मन्त्रीहरुले दिएको अभिव्यक्तिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?’ भनी सुरुमै सोधेका थियौँ ।
घिसिङले आक्रोशित हुँदै मन्त्रीहरु पूर्वाग्रही बनेको र हिन्दु समुदायको मात्रै नेतृत्व गर्ने भन्दै गुनासो गरे । ‘यो मुलुक मेरो पनि हो । म क्रिश्चियन भएकै कारण लखेटिनुपर्ने ?’, घिसिङले आक्रोशित हुँदै भने, ‘त्यसो भए उहाँ त मेरो प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेनछ नी ! जब संविधानमै छ कि, देशनिकाला गर्न नपाइने भनेर । प्रधानमन्त्री त हामीलाई देश निकाला गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ भने यो अधिनायकवाद हो ।’ धर्म परिवर्तनको विषयलाई क्रिश्चियनसँग मात्रै जोडेर हेर्न नहुने भन्दै घिसिङले अहिलेको राज्य पूर्वाग्रही रहेको बताए । साथै उनले पश्चिमा मुलुकमा इसाइ संख्या अति न्युन रहेको तथ्यांक सहित नेपालमा पश्चिमा मुलुक र क्रिश्चियन समुदाय जोडेर हेर्ने गलत मानसिकता रहेको बताए ।
उनले भनेका छन्, ‘पश्चिमा मुलुकले यहाँ इसाइकरण गर्दैछ भने त सबैभन्दा पहिले राज्यलाई थाहा हुन्छ । क्रिश्चियन समुदायका सर्वसाधारण जनतालाई किन गाली गर्ने ? राज्य आफैँले इसाइकरण प्रभाव रोके भयो नी ।’ धर्मनिरपेक्षताको कुरा पनि आफूहरुको खास मुद्धा नरहेको भन्दै नेताहरुले नै धर्मको राजनीति गरिरहेको उनको गुनासो छ । साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने कुनै पनि धार्मिक समुदायले आफ्नो बारेमा बोल्न पाउँछ भन्छन् घिसिङ । उनको गुनासो छ, ‘पशुपतिनाथमा बालबालिका लैजान हुने, चर्चमा नहुने भन्न त मिलेन नी ।’ यसरी राज्य संयन्त्र स्वयं क्रिश्चियन समुदायविरुद्ध नियतवश् लागिरहेको उनको भनाइ थियो ।